Zabesilisa lesikhumba isongo - kungcono accessory imfashini!
Zabesilisa lesikhumba isongo - kungcono accessory imfashini! Abathandi imigexo emihle, imfashini izesekeli lwadlulela Imfanelo ezinjalo, sengathi isongo. Akunandaba ukuthi ubani, owesilisa noma owesifazane, le nto njalo ayimkhangi. Ikakhulukazi ukubukeka ezikhangayo isongo lesikhumba zabesilisa.
Ezikhathini zasendulo, lesikhumba namasongo ziye kabanzi njengendlela iziphandla - uhlobo ukuvikelwa ebubini bonke. Ngokuvamile zenziwa imbuzi isikhumba, njengoba unekhono ngobumnene ahaqe esihlakaleni. Wabanikeza umuntu uqiniseka ukuthi onkulunkulu umbambe ngesandla, futhi lutho kwenzeka kuye.
Kancane kancane, le-accessory isibe umhlobiso esisemqoka abesifazane abaningi futhi amadoda. Akunandaba le ubudala, ingcebo noma ekilasini: lesikhumba namasongo baba ngaphezu organic zokuphendulela.
Isongo njengoba isitayela
Kubukeka ikakhulukazi ezikhangayo lesikhumba isongo amadoda esihlakaleni ka nengxenye enamandla. Abaningi bakhetha ke ukuba igqoke njengenhlangano ibha nenhle ngaphezu isithombe ayo futhi isithombe. Le mininingwane umhlobiso omncane uyakwazi ukugqamisa futhi ukugcizelela isithunzi womnikazi wayo. amandla Imisipha, amandla isandla ukuzethemba - lokho into yokuqala ukuthi abambe iso lakho lapho ingalo amadoda stylish sika lesikhumba isongo.
A ezahlukene esethulwa eMihlanganweni Yesigodi ethi ezitolo, okuvumela zokuphuma model oyithandayo. Noma yimuphi omunye wabo siyokulethela eliyingqayizivele futhi stylish. Ungathenga olulodwa, kabili, mncane noma ububanzi, lizwakalise noma isipikili lesikhumba isongo zabesilisa, ne ezihlukahlukene metal ifaka noma amatshe. Lena akuyona uhlu oluphelele izinhlobonhlobo namasongo.
Indlela bhila isongo
amadoda UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki ethandwa sika lesikhumba isongo ngezandla. Made ekhaya, it is zihlukaniswa okwakhe yayo kanye ehlukile, okufanayo ngeke ubone ikuphi. Lokhu isongo kungenzeka ukwethula njengesipho othandekayo, noma omunye umzalwane.
Yenza kube lula ngokwanele. Ukuze womshini isongo elula, uzodinga ucezu isikhumba (ungasebenzisa ibhande ubudala), intambo eqinile (string) kuya ku-15 cm ububanzi, nomzimba omncane, abukhali ummese onqenqemeni. Sika isikhumba yokulinganisa 27 cm by 1.5 cm. Hlukanisa zibe emapheshana ezintathu ngesikhathi 0.5 cm kodwa hhayi dorezayte
ukuphela (1.5 - 2 cm) komunye umphetho. Sifake a Ponytail elula nephephile ngentambo usiko. Ngesikhathi komunye umkhawulo isongo usike imbobo (0.5 cm) ukuze bewukwati ukuchusha ekupheleni emchilweni zokuhlobisa. Entambeni ukwenza ISIZINDA ezimbili: omunye phakathi, kwesibili ekupheleni - ke kuyokwenzeka ukulungisa ubukhulu. Zonke isongo ngomumo!
Ungabona futhi wenze zabesilisa lesikhumba isongo imihlobiso ezahlukene ukuthi uma ukwazi beveza amaphupho. Ngakho kumugqa zesikhumba kungenziwa bufakwe izipikili, amatshe, ubuhlalu, izinkinobho enhle, ukwenza izimbobo iphethini noma sifake intambo zokuhlobisa.
Qiniseka ukuxhawula yakho, ukushukuma komzimba, ukunyakaza ngeke ahlale kungaqashelwa, kanye nesitayela insiza yakho kuzokwenza umbono.
Uyinki Lost - imfashini indaba ngemali enhle.
I izingubo imfashini kakhulu
Kungakanani ubambe zehena Tattoos? Impendulo!
Shop "Stradivarius": amakheli e Moscow. Isitayela kanye ukuyikhokhela
Tattoo ethandwa kakhulu engalweni zakhe for girls
Cryptocurrency OneCoin: ukubuyekezwa, isazi imibono
Uxhumano ukuqinisekiswa ayitholakali okwamanje (Umsuka): ukuthi yini okufanele uyenze?
Indlela ukhethe umbhalo ngekhibhodi? Izindlela Ukukhetha umbhalo nezingxenye zalo on the ikhibhodi
Alexei Voevoda: i-armwrestling, impilo yangasese
Izikhumba - izinhlanzi zamagumbi ethu
Yini lihlukile Sturgeon sterlet? Lokufanako nalokwehlukile
Lula futhi elula glue stick - Imfanelo esisemqoka ehhovisi zokubhala
Yikuphi ukhuni kuhamba phambili izoso: kukhethwa izici kanye nezincomo
Uyini umhlaba: isakhiwo zangaphakathi nezangaphandle
Ingabe amaprotheni okuyingozi umchamo phakathi nenkathi yokukhulelwa?
Likuphi i-Windows 7 lokunamathisela? Windows 7